WATERPOINT → Onye nnyefe mmiri • Ndị na-arinụ ihe ọ •ụ •ụ • skwado ntutu • Elkay Polska
Tọrọ ụtọ - ọnụ ala
mmiri n'ime ụlọ na azụmaahịa
Hụ ngwaahịa anyị
Mmadu ejirila mmekọ nwoke na nwanyị mmiriNdụ lekwasịrị anya na isi mmalite ya, ụyọkọ mmadụ n'akụkụ niile nke ndụ bilitere. Ọnwụnwa taa imepụta mmiri na nkesa ngwaọrụ ndị dị mgbagwoju anya na usoro teknụzụ so ha.
Companylọ ọrụ anyị, Isi mmiri na-arụ ọrụ n'ahịa ahụ kemgbe 2004.
Anyị bụ ndị nkesa naanị maka Poland nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ.
Anyị na-ere ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ugbu a: Acuva - UV ikanam oriọna, Ihe ịchọ mma - ndị na-enye mmiri, Kama - ndị na-akersụ mmanya na isi iyi, Igwe - obere ije ụlọ, Ọbụ abụ Valve - onye ndu n'ọhịa nke nyocha gburugburu ebe obibi, nha (dịka ntụgharị, nrụgide), ndekọ data na iwu nke netwọkụ na-enye mmiri mbelata valvụ).
Anyị na-akpọkwa gị òkù ka ị mara ụlọ ọrụ ndị ọzọ: CityFormDesign.pl na ImagiLights.pl
firma Acuva tọrọ ntọala na 2014. Ebumnuche ya bụ idozi nsogbu ndị dị ugbu a, merie ihe mgbochi na iche nsogbu ndị ọhụrụ ihu n'inye mmiri ọ drinkingụ safeụ dị mma. Ọ bụ ọkachamara na sistemụ disinfection mmiri na ojiji, yana ngwa OEM dị iche iche. Ka ọ dị ugbu a, a na-anwale ma tinye usoro Acuva niile n'ọrụ na mpaghara ụwa niile.
Acuva Teknụzụ Inc. bụ ndu ụwa l'ẹka ndu .zurẹlu UV-Ikanam mmiri disinfection. Ha na-emepụta, na-azụlite ma na-arụpụta sistemụ UV-LED dị elu maka nsonazụ mmiri ugbu a ma dị irè. Ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ bụ ịnye mmiri ọ drinkingụ safeụ dị ọcha, dị ọcha maka ndị mmadụ n'ụwa niile, wee si otú a na-ebi ndụ dị elu maka ha.
Ihe ịchọ mma Amalitere na 1951 dị ka obere ihe omumu ihe omumu nke ulo maka ndi n’enwe ihe na imeputa ihe maka ulo oru elektrọn.
N'afọ ndị sochirinụ, a na-agbasawanye mmepụta site na ngwaahịa friji na ndabere nke ha, na-amalite mmepụta ndị na-enye mmiri.
Ugbu a, ọ bụ onye na-emepụta ụdị ngwaọrụ dị iche iche nke ụdị a, nke kachasị mma, ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ na ọdịdị ọgbara ọhụrụ, nke emere site na ihe kachasị mma, na-emesi ndị ahịa obi ike ọtụtụ afọ.
A na-eresị ngwaahịa ọla kọpa nye ọtụtụ mba gburugburu ụwa wee nwee ekele maka ịdị mma ha.
firma Kama E guzobere na 1920 na northwest nke Chicago dị ka obere uloru.
Kemgbe ahụ, ọ nọ na-arụ ọrụ mgbe niile imeputa ndị na-akersụ mmanya na mmiri mmiriKemgbe ọtụtụ afọ, na-egosi na anyị na-elekọta maka kacha mma na ụkpụrụ.
Ọ bụ ugbu a onye ndu ụwa n’ahịa a, na-agbasawanye onyinye ya maka ndị nnata, na-agbasawanye ya mgbe niile na ụdị nwere usoro ọrụ ọgbara ọhụrụ, dịka: ọrụ anaghị akpọtụrụ, Green Tricker counter, wdg.
Igwe ọ nwere ụdị ejiji ma gaa n'ihu na-egosipụta usoro okike nke malitere site na ntọala mbụ ya na 1984.
Taa ọ bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe kachasị ukwuu Obere ụlọ ime obodo n'ụwa.
Metalco pụtara .Zọn'ihi na ụdị dị na ngwaahịa ọ bụla na nkọwa niile na-eme ka Metalco dị iche na Akụkọ Ihe Mere ya, na teknụzụ ohuru ohuru. Metalco bụ ngwakọta nke okomoko nke achọrọ ebe obibi esi agwọ ọrịa.
Ọganiihu azụmahịa nke Metalco bụ nsonaazụ nke nnyocha na nnwale na-aga n'ihu na imewe, na-ekelekwa na ntinye aka nke ndị na-ahụ maka ihe owuwu na ndị na-emepụta aha ama ama ụwa, maka ngwaọrụ na teknụzụ ohuru ohuru.
Ọbụ abụ Valve
Ọbụ abụ Valve na-arụ ọrụ na-arụzi akpaka nhazi valvụ maka ụlọ ọrụ mmiri zuru ụwa ọnụ.
Kemgbe 1957, ndị ọdụ ụgbọelu anyị arụnyere valvụ akara diaphragm na kọntinent ọ bụla gburugburu ụwa.
Ma ọ bụ nchịkwa mmiri na Southwest Asia, okwu banyere mmiri nchekwa Saudi Arabia, ma ọ bụ mkpa nkesa nke US, anyị na-enye usoro nchịkwa mmiri maka gọọmentị, obodo, azụmahịa na ndị ọrụ ngo gburugburu ụwa. .
A na-amụpụta ọtụtụ n’ime ngwaahịa anyị ndị ọhụrụ site n’ọchịchọ ebumnuche idozi nsogbu ngwa.
Nsogbu gosipụtara, ndị otu ndị ọkachamara na elektrọnik, ngwaọrụ na valvụ nchịkwa adịghị akwụghachi ụgwọ na nyocha ha na imewe ruo mgbe achọpụtara.
Hụ egwu Singer >>
Ngwaọrụ maka mmiri gass
Ọmarịcha ndị na-enye mmiri na-apụtawanye na ụlọ ọrụ, ọfịs na ọbụna ụlọ ndị mmadụ. Ngwaọrụ nke oge a maka gassing mmiri ...
18 Ka 2020
Bottlesụ karama mmiri
Anyị na-enye karama mmiri ọ drinkingụ drinkingụ maka agụmakwụkwọ, maka ụlọ ọrụ HoReCa, nlekọta ahụike, ụlọ, ọfịs, ụlọ ọha, ogige, ogige ...
Onye na-eme mmiri mmiri
Onye na - ebugharị mmiri mmiri, na - achịkwa ya na nzacha na nlele nrụgide. Mgbanwe nke mmiri na - eme na usoro mmiri na - ebutekarị ...
Hụ akụkọ ndị ọzọ